Fitaovana marketing 9 hanampiana anao hamorona votoaty bilaogy tsara kokoa | Martech Zone
Inona no ilana ny marketing amin'ny atiny?
Moa ve ny famolavolana atiny lehibe sy fampiroboroboana azy amin'ny fantsona maro mba hisarihana ny sain'ny mpihaino anao?
Izany no ampahany lehibe indrindra. Saingy mihoatra noho izany ny marketing amin'ny atiny. Raha fehezinao ny fomba hitanao amin'ireo fotokevitra ireo dia hojerenao ny analytics ary ho tsapanao fa tsy nahasarika fifamoivoizana lehibe ny atiny.
ClearVoice mpivarotra 1,000 no nanadihady mba hahitana hoe inona ny olana lehibe ateraky ny atiny. Ny lisitry ny fanamby lehibe indrindra dia ny kalitaon'ny atiny, ny famoronana ary ny fanamafisana ny atiny, saingy nandeha lavitra kokoa izy io.
Ny fotoana, indrindra indrindra, no fanamby lehibe indrindra. Saingy ny mpivarotra dia sahirana ihany koa amin'ny famoronana hevitra, talenta, fizarana, paikady, firosoana ary tsy fitoviana. Rehefa apetraka ao anaty fe-potoana voafetra ireo anton-javatra rehetra ireo dia mahazo olana isika.
Ka hitantsika fa ny marketing amin'ny atiny, amin'ny fotony, dia sarotra kokoa noho ny andrasan'ny ankamaroantsika. Mila miditra amin'ny toe-tsaina arahin'asa mahomby ianao hanatanterahana ny tanjona rehetra ao anatin'ny fetra voafetranao.
Manampy amin'izany ny fitaovana mety!
Fitaovana marketing amin'ny atiny 9 hanampy anao handresy ny fahateren'ny fotoana
Hihaona amin'i Edgar - Te hifantoka amin'ny famoronana atiny bilaogy mahafinaritra ianao. Raha misy olona (na zavatra iray) afaka hikarakara ny fizarana fizarana dia hahazo fotoana betsaka ianao hifantohana amin'ny lahatsoratrao manaraka. Edgar no fitaovana manampy ilainao. Hanomana ireo lahatsoratra ao amin'ny rafitr'izy ireo ianao, ary avy eo hanoratra fanavaozana status ho an'ny Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, ary Pinterest i Edgar. Ny fitaovana dia tsara amin'ny fanodinana atiny maitso mandrakizay. Izany dia hiantoka ny marikao hijanona ho ilaina na dia tsy mamokatra atiny vaovao matetika araka ny tianao aza ianao.
Quora - Rehefa tsy manana hevitra momba ny lohahevitra hosoratana ianao dia mety handany fotoana be loatra ny sakan'ny mpanoratra. Aiza no ahazoanao ireo hevitra ireo? Azonao atao ny mahita izay nosoratan'ireo mpifaninana aminao, saingy tsy tianao ny maka tahaka azy ireo. Ity misy safidy tsara kokoa: jereo izay gaga ny mpihaino anao.
Zahao ireo fanontaniana ao amin'ny sokajy Quora mifandraika amin'izany, ary avy eo hahazo hevitra vitsivitsy ianao.
Pablo - Ny singa hita maso amin'ny atiny dia manandanja betsaka. Mila sary na sary samihafa ianao amin'ny Facebook, Pinterest, Google+, Instagram, ary ireo fantsona hafa kendrenao.
Miaraka amin'i Pablo dia mora izany ampahan'ny asanao izany. Azonao atao ny mamorona sary mahafinaritra isaky ny lahatsoratra. Misy sary 50K mahery kokoa ao amin'ny tranomboky, mba hahitanao mora foana izay mifanaraka amin'ny atiny. Avy eo, azonao atao ny manamboatra azy ireo amin'ny teny nalaina avy tamin'ny paositra, ary misafidy habe mety ho an'ireo tambajotra sosialy samihafa.
Hemingway App - Mila fotoana be ny fanovana, sa tsy izany? Vantany vao vita ny fanoratanao lahatsoratra bilaogy, ianao = te handalo azy haingana ary hamoaka azy. Saingy mila mijery bebe kokoa amin'ny sehatra fanovana ianao; Raha tsy izany ianao dia mety hampidi-doza amin'ny famoahana drafitra tsy feno miaraka amin'ny fomba manafangaro.
Hemingway App dia mahatonga ity ampahan'ny asanao ity ho mora araka izay itiavany azy. Ho diso ny fitsipi-pitenenana sy ny tsipelina. Fa tsy izay ihany. Mampitandrina anao koa ny fitaovana momba ny fahasarotana, ny adbika ary ireo singa hafa izay mampihena ny hafatra.
Araho fotsiny ireo tolo-kevitra ary ataovy mora vakina kokoa ny atiny.
ProEssayWriting - Ireo fitaovana voatanisa etsy ambony ireo dia manampy anao amin'ny fikirakirana ny lafiny samihafa amin'ny fampielezankevitra momba ny varotra atiny, fa ahoana kosa ny ampahany amin'ny fanoratana? Fantatrao fa tsy afaka miantehitra amin'ny lozisialy tokoa ianao raha ny momba an'io.
Saingy amin'ny fotoana iray na hafa, mety ho tafintohina ianao. Manana fandaharam-potoana votoaty voaomana tsara ianao saingy tsy afaka mitantana hanoratra ara-potoana ny lahatsoratra rehetra. Angamba eo afovoan'ny sakan'ny mpanoratra ianao. Angamba fiainana fotsiny izany ary tokony hametraka fitsaharana amin'ny fanoratana ianao.
Amin'ny toe-javatra toy izany, afaka manampy betsaka ny serivisy fanoratana matihanina. ProEssayWriting dia sehatra iray ahafahanao manakarama mpanoratra manam-pahaizana avy amin'ny sokajy samihafa. Homenao azy ireo ny torolalana ary hanatitra atiny miavaka 100% amin'ny fe-potoana farany nomenao izy ireo.
Essays tsara indrindra - Best Essays dia serivisy fanoratana atiny malaza indrindra. Azonao atao ny manafatra lahatsoratra amin'ny bilaogy amin'ny lohahevitra rehetra, raha toa ka manakarama mpanoratra avy amin'ny faritra samihafa amin'ny fandinihana ny orinasa. Ny Best Essays dia tsara ho an'ny taratasy fotsy sy e-book fotsy avo lenta, fa afaka mahazo atiny tsotra kokoa ihany koa ianao isaky ny mila azy ireo ianao.
Io serivisy io dia mamela anao hametraka fe-potoana tena fohy (manomboka amin'ny 10 andro ka hatramin'ny 3 ora), ary mahazo antoka ianao amin'ny fandefasana ara-potoana.
Taratasy Ambony - Raha mikasa ny hanome ny ampahany amin'ny fanoratana atiny mandritra ny fotoana maharitra ianao, ny Superior Papers dia safidy lehibe. Rehefa misafidy ny maha-mpikambana an'i Ruby na i Diamond ianao dia hahazo fihenam-bidy tsy tapaka. Fanampin'izay, hiara-miasa amin'ireo mpanoratra mahay indrindra amin'ny ekipa ianao.
Raha manomboka miara-miasa amin'ny mpanoratra manokana ianao ary tianao izay azonao dia azonao atao ny manakarama an'io manam-pahaizana io ihany.
Ankoatra ny fanampiana an-tsoratra dia manolotra tolotra fanovana matihanina ihany koa ny Superior Papers.
Serivisy fanoratana andraikitra - Serivisy fanoratana anglisy ity. Raha mikendry ny mpihaino anglisy ny bilaoginao dia tsy ho azon'ny mpanoratra amerikana iray izany fomba izany. Amin'izay, ny Brill Assignment no safidy tsara indrindra.
Ireo mpanoratra dia manolotra atiny avo lenta amin'ny karazana lohahevitra rehetra. Ho fanampin'ny lahatsoratra bilaogy, azonao atao koa ny manafatra fandinihana tranga, fampisehoana PowerPoint, tetik'asa famolavolana sary, sns.
Australian Writings - Australian Writings dia sampan-draharaha manoratra mitovy amin'ireo olona vitsivitsy voalaza etsy ambony. Ny tsy fitoviana, araka ny anarany ihany, dia ny tanjon'ny Aussie no kendreny. Ka raha mila mpanoratra avy amin'ity firenena ity ianao raha te hanana fomba mety, dia eo no ahitanao azy ireo.
Ny vidiny dia efa takatry, fa ny orinasa koa dia manome fihenam-bidy lehibe ho an'ny mpampiasa mahazatra.
Raharaha lehibe ny fitsitsiana fotoana. Rehefa ataonao mahomby kokoa ny fampielezan-kevitra momba ny varotra atiny dia manomboka mahazo fifamoivoizana ianao ary mandresy lahatra ny mpihaino handray andraikitra. Antenaina fa hanampy anao any ireo fitaovana voatanisa etsy ambony.
Tags: asa soratra aostralianasanganasa tsara indrindramamirapiratraserivisy fanoratana andraikitra tsaraContent Marketingloharanom-bola amin'ny marketingserivisy atinyfampiharana hemingwaymihaona edgarPablotaratasy ambony
Ahoana ny fampiharana ny fidirana amin'ny mailaka amin'ny teknolojia fanampiana